Kedu ihe kacha mma ị na-ere n'Ịntanet?
Onye ọ bụla hụrụ ego n'anya, Amazon na-enyekwa ohere niile ime ya. Ọ bụ ya mere ahia azụmahịa na Amazon ji jupụta ebe niile n'oge anyị. Imirikiti azụmahịa ndị azụmahịa na-ebute ngwaahịa ha na Amazon nke mere ka usoro a dị oke egwu. Kedu ihe ọzọ, Amazon chọrọ ịgbaso ntuziaka kachasị mma maka ịmepụta ngwaahịa gị na ọchụchọ.
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụrụ na Amazon, ọ nwere ike isiri gị ike ịbanye na TOP nke Amazon na-enweghị mmejuputa ihe ọ bụla ọkachamara Amazon ọkachamara. N'isiokwu a, anyị ga-atụle ngwanrọ kacha mma n'ịntanetị maka ndị chọrọ ire ere na Amazon dịka pro.
Ihe kacha mkpa mere ị ji eji ngwaọrụ Amazon
Iji nweta uru bara ụba, ịkwesịrị itinye ego n'ime onwe gị. Amazon bu ihe omuma, ma oge ma ego. Ọ bụrụ na i tinye akụkụ ndị a n'ọrụ gị, ị ga-akwalite uru ole na ole n'ime ọnwa ọ bụla. Otú ọ dị, ọ dị anyị mkpa mgbe niile; ọ bụ ụzọ ụwa si arụ ọrụ.
E nwere nanị 24 awa n'ụbọchị, ọbụna ndị ahịa Amazon chọrọ ihi ụra. Ya mere, ọ bụrụ na ijikwa ihe niile n'onwe gị, ị ga-etinye onwe gị n'ihe ize ndụ na ọrụ gị. Were ya na ịchọrọ ịme nyocha, nyocha, nsuso na nyochaa onwe gị, na-atụnyere ọtụtụ data na aka. Kedukwanụ maka ịchọta na mbupu ọtụtụ narị mmadụ iwu n'ụbọchị? Ee, ọ bụ n'ezie-agaghị ekwe omume. Amazon nwere ike ime ka ndụ gị dịkwuo mfe inye gị mmezu ọkachamara. Ọ pụtara na ọ bụ Amazon ga-edozi mbupu gị nile, ịnyefe na nkwado okwu. Ị nwere ike ịbupu ngwaahịa na ụlọ nkwakọba ihe ma lekwasị anya na azụmahịa gị Amazon. Otú ọ dị, ọ bụ nanị ọkara nke agha ahụ. Ọ bụla mkpa azụmahịa na-eto, n'ihi ya, ị ga-etinye ego buru ibu nke ụbọchị ọrụ gị na-azụlite azụmahịa gị. Ịkwesịrị ịrụ ọrụ na ndepụta gị, chọọ maka isiokwu ọhụrụ a na-echekwa, nchịkwa ngwaahịa na ngwaahịa na Amazon SERP, malite ihe ndị ọzọ ma melite ọrụ nkwado ndị ahịa iji mee ka azụmahịa gị mara ma mee ka ego ha nweta. Ma ihe a niile na-ewe oge na mgbalị. Ya mere ịchọrọ ụfọdụ ọrụ ndị ọzọ ga-enyere gị aka ijikwa ihe ndị a nile. Cheta, na ị ga-arụ ọrụ na azụmahịa gị, ọ bụghị na ya. Dị ka a na-achị, ndị ahịa na-achịkwa akụ na ụba, niile na-enweghị emetụ ngwaahịa ma ọ̄ bụ ịdọ aka ná ntị banyere obere nkọwa.
Ya mere, ị nwere mgbanwe dị iche iche nke mmepe ahịa azụmahịa gị. Ị nwere ike iji ndị ọkachamara na ụlọ na SEO ọkachamara ma ọ bụ ịdabere na akpaaka na Amazon software. Ma m, nhọrọ ahụ doro anya. N'iji ngwaọrụ intaneti, ị ga-enwe ike ime ihe niile n'ụzọ ziri ezi ma ọ bụrụ na ị naghị enwekwu ọganihu. Ọ bụ isi ihe na-eme ọganihu Amazon gị. Ya mere, ka anyị tụlee ihe kachasị mkpa Amazon na nyocha nke ga-abụrụ gị aka na azụmahịa azụmahịa Amazon.
Ngwá ọrụ Amazon kachasị mma maka ịdị mma ọkwa gị
Ikwesiri ịmalite egwuregwu ecommerce dị ka onye mmeri. Ya mere, ọ dị mkpa ịhọrọ ụdị ahịa ahịa kachasị mma na ngwaahịa ndị ị ga-ere ahịa. Iji mee ka ọrụ a dị mfe, ị nwere ike iji ngwá ọrụ Jungle Scout. Ngwaọrụ a ga - enyere gị aka ịchọta ngwaahịa Amazon ị nwere ike ịba uru, ngwa ngwa na enweghị ihe ọ bụla. Iji ngwá ọrụ Scout nke Jungle, ị ga-ebelata ihe ize ndụ ma bukwuo oke uru dịka ọ na-enyere aka ịchọta ohere kwadoro site na mgbasa ozi ahịa Amazon nke kachasị ịdabere na ya na ụlọ ọrụ ma zere ajọ njehie. Ngwa weebụ a na-enye usoro nhazi nhazi maka ịchọpụta ngwaahịa Amazon na nnukwu nchekwa data nke ozi. N'ebe a, ị nwere ike ịhọrọ edemede, ịchọta ihe kacha mma ere ahịa, ahịa, reviews, na ihe ndị ọzọ.
E nwere ụzọ abụọ otu ị ga - esi jiri usoro Jungle Scout - dị ka ngwa weebụ, ma ọ bụ dị ka ntanetị Chrome.
Iji ya dị ka ngwa weebụ, ị na-enweta ohere ịchọta akụrụngwa na ngwaahịa na-akwụ ụgwọ na mpaghara Amazon dum. Mgbatị a na-enye gị ohere iji nyochaa nchekwa data Amazon dum site na ụdị, ọnụahịa, ahịa, na ndị ọzọ metric iji nyere gị aka ịchọta ihe ndị a na-enweghị ike ịchọta.
Ọ bụrụ na ị na-eji ngwá ọrụ Jungle Scout dịka nchịkọta Chrome, ị ga-enwe ike inyocha ma gosipụta ngwaahịa dịka ị na-agagharị. Ị ga-enwe ike ịlele ọnụọgụahịa nke ọ bụla, atụmatụ ndị e mere atụmatụ, nyochaa ọnụ ọgụgụ na ọbụna data ndị ọzọ maka ihe atụ zuru oke.
N'adịghị ụbụrụ nke ngwá ọrụ a, enwere m ike ịkọ ụgwọ ịgba ụgwọ na-esonụ, nanị ụbọchị ikpe ụbọchị asaa ma ọbụghị nchekwa data zuru ezu.
Ozugbo i nwere echiche nke ngwaahịa ịchọrọ ịkwa ahịa, ị ga-enweta ngwaahịa anụ ahụ. Ịchọta ngwaahịa na ịnweta ihe ntanetị bụ ikpuchi mgbochi a na-apụghị izere ezere nke a na-agaghị ahapụ ma ọlị na nhazi mbụ nke mgbasa ozi ahịa Amazon gị.Ọrụ a na-atụkarị egwu, ọ bụ n'ihi na ọtụtụ ndị na-azụ ahịa bụ ndị mba ọzọ. Otú ọ dị, ịchọta ezigbo onye na-ebu ya nwere ike ịdị mfe karịa ka ị na-eche. Ka anyi deputa ihe ndi ozo nwere ike inyere gi aka na oru a.
Alibaba bụ ebe a na-akpọ Chinese n'elu ebe ị nwere ike ịzụta nnukwu. Ihe ka ukwuu n'ime ihe ndị a dabeere na nke a na-arụ na Eshia. Ọ bụ ya mere ọnụahịa ha anaghị adị elu ma ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere ngwaahịa ndị e mere na United States na Europe. Ya mere, Alibaba bu uzo gi kacha mma. N'ileghachi anya na mbụ, o yiri ka ọ dị njọ, ma ị ghaghị ịmalite. Mbụ, ịkwesịrị ịnye arịrịọ azụmaahịa, wee chọpụta onyinye ngwaahịa na kọntaktị na onye na-ebu ngwaahịa site na email ma ọ bụ Skype. Nke mbụ, ị ga-arịọ maka ngwaahịa ngwaahịa sitere na ndị na-eweta ihe dị iche iche iji nwee ike iji tụnyere àgwà. Ị kwesịrị ịma na ọtụtụ ndị na-azụ ahịa bụ nanị ụlọ ahịa na-azụ ahịa nke nwere ike ime ka ọ dịkwuo mfe kama ọ dị ọnụ karịa. Ọzọkwa, ọ bara uru ịkọ na Alibaba bụ nnoo Aliexpress maka ihe atụ na naanị ntakịrị ọdịiche na ịnye ọnụahịa. Otú ọ dị, saịtị a dịkwuo ezi karịa ndị ọzọ na-azụ ahịa Chinese.
N'etiti nkwenye nke ikwenye na Alibaba, enwere m ike ịkọwa ndị na-esonụ:
ọ na-atụ egwu ịmalite;
enwere otutu scammers.
Ihe ndị a dị mkpa ga-enyere gị aka ịmalite mmalite. Otú ọ dị, mmepụta na-ewekarị oge. Ya mere, ị nwere ike iji oge a rụọ ọrụ nke oma site na itinye ya na edepụta okike na njikarịcha Source .